Mgbaaka nke Saturn: njirimara, mkpa na nchọpụta | Network Meteorology
Saturn bụ otu n’ime mbara ala ndị dị n’usoro mbara igwe ma ọ dị n’ime otu mbara ala gas. Ọ pụtara maka inwe mgbaaka na ọ bụ otu n'ime mbara ala abụọ kachasị ama ama na mbara igwe anyị. Ọ nwere ike na-adị mfe anya site na ala ekele na Saturn yiri mgbaaka.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mgbaaka Saturn, otu esi kpụọ ya yana ụdị njirimara ha.
1 Planetwa nwere yiri mgbaaka
2 Ọnwa ole na
3 Saturn yiri mgbaaka
4 Nyochaa yiri mgbaaka nke Saturn
Planetwa nwere yiri mgbaaka
Saturn bụ ụwa pụrụ iche. Maka ndị ọkà mmụta sayensị, a na-ahụta ya dị ka otu n’ime mbara ala ndị kachasị amasị ịghọta usoro mbara igwe niile. Okwesiri ighota na o nwere njuputa di ala karie mmiri ma juputara na hydrogen, ya na obere helium na methane.
O so na udi nke mbara igwe buru ibu ma nwee agba di iche kariri nke puru iche. Ọ dị ntakịrị acha, nke e jikọtara obere ibe agba ndị ọzọ. Ọtụtụ mmadụ na-ehie ya maka Jupita, mana ha enweghị mmekọrịta. Ejiri mgbanaka mara ha nke ọma. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na mgbanaka ha bụ mmiri, ma ha siri ike dị ka icebergs, icebergs, ma ọ bụ ụfọdụ snowball, karịsịa na ụfọdụ ụdị uzuzu chemical.
Ọnwa ole na
N'ime àgwà ndị a niile na-adọrọ mmasị na-eme ka Saturn bụrụ ụwa na-atọ ụtọ, anyị ga-enwerịrị ike igosi ọnwa ndị mepụtara ya. Ruo ugbu a, ndị ọkachamara n’ihe ọmụmụ physics atọ atọ akọwola ma kpọọ satellit 18 n’ubi ahụ. Nke a na-eme ka mbara ụwa dịkwuo mkpa yana ọtụtụ mmadụ. Iji ghọta ha nke ọma, anyị ga-edepụta ụfọdụ n'ime ha.
Ndị kasị mara amara bụ ndị a na-akpọ Hyperion na Iapetus, nke mmiri mejupụtara kpamkpam, ma ọ siri ike nke na a na-eche ya, n'otu n'otu, na ha kpụkọrọ akpụkọ ma ọ bụ dịrị dị ka ice. Saturn nwere Satellime ime na mpụga. N'etiti akụkụ dị n'ime, nke kachasị mkpa bụ usoro dị n'ime ebe orbits a na-akpọ Titans dị. Ọ bụ otu n'ime ọnwa ndị kasị ibu Saturn, ọ bụ ezie na nnukwu oroma oroma gbara ya gburugburu, ọ dịghị mfe ịhụ.
Saturn nwere Satellime ime na mpụga. N'etiti akụkụ dị n'ime, nke kachasị mkpa bụ usoro dị n'ime ebe orbits a na-akpọ Titans dị. Ọ bụ otu n'ime ọnwa ndị kasị ibu Saturn, ọ bụ ezie na nnukwu oroma oroma gbara ya gburugburu, ọ dịghị mfe ịhụ. Satellite satịlaịtị bụ otu n'ime Satellites jikọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nitrogen.
Ihe dị n’ime satịlaịtị a bụ okwute nwere ihe ndị mejupụtara ya dịka carbon hydroxide na methane, ndị yiri mbara ala ndị ọzọ. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-abụkarị otu, ọtụtụ ha ga-asị, ọbụlagodi na nha ha bụ otu.
Saturn usoro mgbanaka bụ isi mmiri na mmiri na-ada na oke nha. E kere ha ụzọ abụọ, ndị nke "Cassini Division" kewara: mgbanaka A (mpụga) na mgbanaka B (n'ime), dịka ha si dị nso na mbara ụwa.
Aha nkewa sitere n'aka onye nyocha ya, Giovanni Cassini, onye French na Italiantali na-enyocha mbara igwe nke chọpụtara nkewa nke kilomita 4.800 n'obosara na 1675. Otu B nwere ọtụtụ narị mgbaaka, ụfọdụ n'ime ha nwere ọdịdị elliptical nke na-egosi mgbanwe na njupụta nfe n'ihi mmekọrịta ndọda n'etiti mgbanaka na satịlaịtị.
Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị akpọrọ "radial wedges" nke na-agbagharị gburugburu ụwa na ọsọ dị iche na nke ọzọ nke ihe mgbanaka ahụ (ihe ndọta mbara igwe na-achịkwa mmegharị ha).
Amabeghị radial wedges ka amabeghị ma ọ nwere ike ịpụta ma pụọ ​​n'anya. Dabere na data enwetara site na njem ụgbọelu Cassini na 2005, enwere ikuku gburugburu mgbanaka ahụ, nke enwerekarị oxygen oxygen. Ruo 2015, echiche banyere otu esi emepụta mgbaaka Saturn enweghị ike ịkọwa ịdị adị nke obere mkpụrụ ice.
Ọkà mmụta sayensị bụ Robin Canup bipụtara nkwupụta ya na n'oge a na-amụ usoro mbara igwe, Satellite Satellite (nke mebere ice na nkume isi) dara n'ime ụwa ma kpatara nkwekọrịta. N’ihi ya, a chụpụrụ nnukwu iberibe iberibe iji mepụta halo ma ọ bụ mgbanaka nke ihe dị iche iche, nke na-aga n’ihu na-emekọrịta onwe ha ka ha na-agbakọ na mbara igwe, rue mgbe ha mepụtara nnukwu mgbaaka ndị a maara taa.
Nyochaa yiri mgbaaka nke Saturn
Na 1850, onye na-enyocha mbara igwe bụ Edouard Roche mụrụ banyere mmetụta nke ike ndọda ụwa na satịlaịtị ya wee gbakọọ na ihe ọ bụla dị n'okpuru 2,44 ugboro okirikiri nke mbara ala enweghị ike ijikọ aka mepụta ihe ma ọ bụrụ na ọ bụrụworị ihe, ọ ga-agbaji. Saturn dị n'ime C bụ 1,28 ugboro okirikiri na mgbanaka mpụga A bụ 2,27 ugboro okirikiri. Ha abụọ dị n'ime oke Roche, mana amabeghị mmalite ha. Site na ihe ha nwere, enwere ike idobe okirikiri nke di ka onwa.
Ihe mbu nke ihe mgbanaka ahu bu ihe kpatara ike nke satellites di nso na ike ikuku nke sitere na gburugburu Saturn. Agbanyeghị, nyocha Voyager ahụrụ ụlọ ndị gbara ọchịchịrị na-enweghị ike ịkọwa n'ụzọ dị otu a. Ihe owuwu ndị a na-agbagharị na mgbanaka ahụ na ọsọ ọsọ nke magnetosphere nke ụwa, n'ihi ya, ha nwere ike iji ikuku ndọta ya na-emekọrịta ihe.
Ngwurugwu ndị mejupụtara mgbaaka Saturn dịgasị iche na nha, site na obere microscopic ruo na nnukwu, iberibe ụlọ. N'ime oge, ha ga-anakọta foduru nke comets na asteroids. Ọtụtụ n'ime ihe na-akpụ ha bụ akpụrụ mmiri. Ọ bụrụ na ha emeela agadi, ha ga-acha oji n’ihi nchịkọta nke uzuzu. Eziokwu ha na-enwu na-egosi na ha bụ ụmụaka.
Na 2006, ụgbọelu Cassini chọtara mgbanaka ọhụrụ mgbe ị na-eme njem na ndò nke Saturn n'akụkụ nke ọzọ nke anyanwụ. Nzuzo nke anyanwụ na-eme ka o kwe omume ịchọpụta ihe ndị na-adịghị ahụkarị. Ihe mgbanaka dị n'etiti F na G dabara na gburugburu nke Janus na Epimetheus, satellites abụọ a fọrọ nke nta ka ha kesaa gburugburu ha ma gbanwee ha mgbe niile. Ikekwe, meteors ndị na-emekọ ihe na Satellites a ga-emepụta ihe ndị na-akpụ mgbanaka.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara mgbaaka Saturn na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Saturn yiri mgbaaka
Enwere m ọ joyụ na ihe ọmụma ọhụrụ na isiokwu a dị mkpa nke eluigwe na ụwa anyị enweghị ngwụcha, nwee olile anya na ị ga -eji ihe ọmụma bara uru dị otú a mee ka anyị baa ọgaranya.